Incazelo yesitshalo nokusetshenziswa kwayo emithi yokwelapha.
Izakhiwo eziwusizo zesitshalo
Ngokuvamile lesi sitshalo sisetshenziselwa ukutshala izitshalo eziluhlaza ukuze zenze isimo semvelo sibe ukubonakala kwemvelo. Kuyinto eluhlaza njalo futhi iqhakaza nge pink pink noma izimbali ezimhlophe, ezitholakala phezulu kakhulu stem.
Kodwa leli bhanana alusizo kuphela emkhakheni we-aesthetics. Ngokungangabazeki, amaqabunga ayo omnyama nezimbali ezikhanyayo ziyohlobisa insimu nganoma yisiphi isikhathi sonyaka, kodwa ngaphezu kwalokho, lesi sitshalo sisetshenziselwa ukusiza imithi yokwelapha ukulwa nezifo ezihlukahlukene.
Kuvela ukuthi le mbali ekhanyayo kusukela ezikhathini zasendulo yasiza okhokho bethu ukuba baqede izifo eziningi, futhi ama-tinctures kanye nama-decoctions ngesisekelo sawo ayathandwa kakhulu.
Unamandla okunciphisa ukuvuvukala, ukulwa namabhaktheriya nokuphulukisa amanxeba
Ngesizo salo, thinta isifo samathambo kanye nezinye izifo zesisu (ukukhulelwa komkhuhlane kanye ne-fibromyoma)
Isetshenziselwa ukwelashwa komlomo wesikhumba candidiasis nokuqedwa kwama-microorganisms we-putrefactive ezivela ezithombeni ezihlukahlukene
Izakhi zemvelo ezakha le mbali ziyakwazi ukulwa nezinhlobo ezimbi
I-tea eyenziwe i-badana, iphikisana ngokuphumelelayo nokucindezeleka, ikhulula ukukhathala futhi inomphumela wokubuyisela emzimbeni, ukwandisa ukusebenza kwayo
Izinkinga ezikhanyayo ngokugaya (ngokwesibonelo, ukushaya kwenhliziyo, isicanucanu nokuvimbela) kuzosiza ekuqedeni i-decoction ye-badan.
Kubalulekile! Akuzona zonke izitshalo ezifanelana nokulungiswa kwemithi. Ngokuyinhloko, isitshalo sembali eneminyaka emithathu isetshenziswa. Iyakhiwa ngoJuni, bese yoma endaweni eyomile. Kodwa ungagcina leli thuluzi iminyaka emine.
Ukusuka ekuphumeni kwegazi emva kokubeletha kanye nenyanga enkulu kakhulu
Izimpande ezintsha zokugaya ukuze isipuni setafula sesidakamizwa siphume futhi sengeze engilazi yamanzi okufanele isiliswe ngomlilo. Cishe ngokushesha, uketshezi kumele kuvulwe futhi kuvunyelwe ukuma. Uma ingxube iba yikamelo lokushisa, lihlungwa bese lithathwa isipuni kathathu nsuku zonke ngaphambi kokudla.
Izinsini zokuphuza kanye ne-candidiasis
Ukubhekana nalezi zinkinga, udinga ukulungisa ukumnika ukuhlanza. Ukukhipha isitshalo sokwelapha kumele kugcwaliswe ama-350 amagremu amanzi ashisayo ashisayo. Vumela ukuma okungenani amahora amane, bese usebenzisa ukuhlanza umlomo wakho emini.
Ngokuvamile le nqubo isetshenziselwa izifo ezinzima zamaphaphu kanye ne-bronchi. Amagremu angamashumi amahlanu wezimpande omisiwe ze-badana athululela amagremu ayikhulu e-vodka noma utshwala. Thina sivale imbiza nge-lid bese sigcizelela izinsuku eziyishumi endaweni emnyama. Khona-ke uketshezi kumele kuhlungwe ngokucophelela futhi kufakwe izimpande. Thatha umuthi ngamaconsi amathathu ngamapuni wezipuni kunoma yiluphi uketshezi kathathu ngosuku.
Ukuze ubhekane nezifo zezitho zocansi, abesifazane bayelulekwa ukuba balungise izinqumo zokuvumelanisa. Izipuni eziyisithupha zezimpande ezomile zithelelwa ku-400 g amanzi abilayo futhi ziqhubeke ukupheka ekushiseni okuphansi eminye imizuzu eyishumi nanhlanu.
Ngenkambiso, udinga ukuhlunga isipuni sesidakamizwa ngetitha lamanzi abilisiwe.
I-Badan kunomthelela ngokuthinta umzimba, futhi uzizwa zonke izintelezi zokudlula ngokweqile kunzima kakhulu. Kodwa namanje, abantu ababhekene ne-thrombosis nokuqokwa okuhlala njalo, kuzodingeka bayeke ukuthatha lesi sidakamizwa. Awukwazi ukwamukela ubhontshisi nalabo abanokungaboni ngaso linye izinto eziqukethwe kwisitshalo.
Ngaphambi kokuthenga noma ukulungiselela lokulungisa ngokwakho, thintana nodokotela wakho ozoya khona ukuze umzamo wokusiza umzimba ululame akubanga nemiphumela emibi.
Emzabalazweni wemilenze enempilo: amanzi ashisayo kanye ne-thalassotherapy
Umphumela wokulala emzimbeni womuntu
Heliotherapy - ukwelashwa kwelanga
Yini okudingeka ukwazi nge-anesthesia?
Ungazivikela kanjani kumakhiza
I-charm yobuKristu: umshado ugqoka ngempango evulekile
I-Piquant ijabulela nge-Sex Shop eMoscow
Imithetho eyisisekelo yokunakekelwa kwemilenze yabesifazane
Thenga isilwane esisha esiyingqayizivele
Konke okubalulekile ukwazi nge-abicah ibhu
Inkabi ihamba ngegalikhi
Ukusetshenziswa kwamafutha abalulekile e-rosewood
Yiziphi izinto okufanele ngizithathele esibhedlela?
Mayelana nezinzuzo ze-caviar ebomvu
Amapancake anezinhlanzi ezibomvu
Indlela yokupompa intombazane yokucindezela ekhaya
Omelet nge isipinashi
Ingabe izindawo zokuzalwa ziyingozi?